Kunezindlela ezahlukene lapho ungakwazi adlulisele kakhulu ngokunembile okushiwo omuhle wobuciko. Omunye wabo - lena aphindaphinde lesifanele.
Kusho ukuthini nokusho?
Ngo emithonjeni ehlukahlukene, izwi sitolikwa ngezindlela ezahlukene. Kodwa ngomqondo ovamile uwukuthi rant - ke ukufunda, hlabelela temibhalo yephrozi netindzaba ekhululekile noma izinkondlo. Lokhu ukuhumusha imiqondo eziqukethwe izichazamazwi sakwaEfrayim, Ozhegova Ushakova, uDalia.
Abanye abalobi ukunikeza incazelo yesibili. Ngokusho kwabo, yishoni ngekhanda - a rant, nge bokubanga zamanga.
Kungani udinga amakhono ngekhanda?
Kusukela ekuqaleni kuka abasesikoleni, kanye esikhathini yokufunda esikoleni, othisha nabazali banake enkulu ekufundeni ekhululekile izinkondlo. Ngaphezu kwalokho, temibhalo yephrozi netindzaba yengane, futhi, kumelwe sifunde hlabelela. Leli khono akusibuyiseli Reader ukujabulela ubuhle ulimi, ukuqonda incazelo ejulile, uzizwa kwemizwa esivela umbhalo, kodwa futhi ukudlulisa kwabo bonke ababelizwa izwi.
Ezemfundo Ukufundwa ekhululekile kwenza kube nokwenzeka ukuba uthole osenyameni ezingokwengqondo, injabulo bezibona omuhle wobuciko. Konke lokhu kuye kwaba nomphumela omuhle ekuthuthukisweni ezingeni ngokomzwelo ingane.
Funda indlela nokusho - is, ngaphezu kwakho konke, ukulandela imithetho ethile kanye namathiphu. Ngaphandle ukuhambisana ukufeza umphumela oyifunayo kuyoba nzima kakhulu.
Okokuqala sidinga ukuba banake degree of ukuthuthukiswa yokukhuluma apharathasi wengane. Kufanele ukusebenza ngokuphelele. Ngenxa yale njongo, ilungiselela ukufunda ekhululekile umzimba ekhethekile afakiwe - "Pendulum", "ihlumela", "isele", "Horse" kanye nabanye abaningi.
Singaqiniseki chistogovorok okuqukethwe okuhlukile - kungenye umsebenzi ewusizo. Kuyasiza ukuba kuvelwe silulumagama, futhi umphumela waba ukuthi wonke umsindo ngamunye kanye inhlanganisela yabo ingane uyokhuluma ngaphandle zamehlo.
Isitatimende ukuphefumula nakho kubalulekile lapho beqeqesha aphindaphinde ematheksthi etemibhalo. Kukhona umzimba eziningi eziyobe ukufundisa ingane ukudlala, ngendlela bezijabulisa ukushaya futhi sakwazi ukuphefumula ngendlela efanele ngenkathi ufunda.
Yini obusa ukulandela?
Zihaya izinkondlo - kuyinto art sangempela. Ukuze sifinyelele ukuphelela kuyo, kudinga njalo umsebenzi onzima. Zikhona izindlela eziningi ukuze kusetshenziswe ngokuqondile ngesikhathi umsebenzi umbhalo umsebenzi.
Okokuqala, lapho kufundwa senkondlo noma temibhalo yephrozi netindzaba kudingeka uthole ngokuphelele lahlani ukukhathazeka. Noma iziphi izimpawu ke abe nomthelela ongemuhle izinga ukusebenza.
Okwesibili, kufanele sikhumbule ukuthi umbhali emsebenzini wakhe njalo lidlulisela lahlukene imizwa nemizwelo. Uzama ukukhombisa umbhalo nesimo sakho nendaba noma mkhuba. The Reader liyadingeka ukuze uqonde kangcono okushiwo umsebenzi futhi uwulethe ukwazi isilaleli sika. kuhambisana kahle reception lapho umfundi Uyoletha ngokwabo e indima umbhali nkondlo. Kulokhu, kufanele luphathwe amagama ngqo abafundi, ukuhlola indlela abasabela ngayo lokho abakuzwayo.
Amagama nemisho imisebenzi zikhale zemvelo. Ukuze kuzuzwe lokhu kuzosiza ukuqondanisa afanele umbhalo ukucindezeleka okunengqondo, ukuhambisana zikhawu ukufunda, okuyinto kunqunywa -copyright emamaki tiphumuti.
Funda ukubona futhi asebenzise izimpawu zokubhala izinhlamvu ngesikhathi esifanayo ithoni kwesokudla izwi lapho ekuchubeni umbhalo - omunye amakhono ebalulekile yokufunda aphindaphinde.
Ukusenza umkhuba ukufunda ekhululekile Kunconywa ngaphambi kwesibuko. Lokhu kuzosiza ukulawula isimo sobuso babo Reader, uma kudingekile - engeza ukuthintwa.
Izincwadi mayelana Dragons Russian kanye abalobi angaphandle. Uhlu lwezincwadi engcono
Nikita Valerevich Kryukov - skier abadumile Russian
Sensorimotor aphasia unhlangothi ezilandelayo
Yiziphi abaphathi ubuchwepheshe?
Kungani iphupho impukane
Amazwe namadolobha, lapho efudumele ngoJanuwari
Ngingaba uphuze amanzi ngemva kokuzivivinya futhi kungakanani?